३ सय करोडमा इन्ट्री होला ‘टाइगर जिन्दा हे’ ? | Jukson
सलमान खान र कटरीना कैफ अभिनीत फिल्म ‘टाइगर जिन्दा हे’को ट्रेलर सार्वजनिक भैसकेको छ । अब ट्रेड एनालिस्टले अनुमान लगाउन थालेका छन् कि के फिल्मले बक्स अफिसमा ३०० करोडको आँकडा पार गर्न सक्ला ?
मंगलवार बिहान करीब साढे ११ बजेको आसपासमा फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएको थियो । रिलिजको केही समयपछि नै लगभग ५ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका थिए भने १ घण्टामा करीब ५१ हजारभन्दा धेरैले लाइक गरेका थिए । यस्तै, २० घण्टापछि ट्रेलरलाई १३ मिलियन भ्यूज मिलेको छ । खतरनाक एक्सनसँगै फिल्मको लोकेशन पनि हेर्न लायक छ । ट्रेलर हेरेर यो कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ कि फिल्म बक्स अफिसमा हिट हुन सक्छ ।
यदी ‘टाइगर जिन्दा हे’ ३०० करोड क्लबमा प्रवेश र्गयो भने यो क्लबको २० औं इन्ट्री हुनेछ । यदी वर्ल्डवाइड कमाईको कुरा गर्ने हो भने बक्स अफिसमा अहिले १९ फिल्म छन्, जसले वर्ल्डवाइड ३०० करोड क्लबमा आफूलाई उभ्याएका छन् । फिल्मको ट्रेलर हेर्ने हो भने लाग्छ कि सलमान(कटरीनाको जोडी एकपटक फेरि बक्स अफिसमा धमका मच्चाउन तयार छन् ।
फिल्ममा आतंकवादी संगठनले २५ जना भारतिय नर्सको किडन्याप गरेका हुन्छन् । अब यो समस्याको समाधानका लागि टाइगरलाई फिर्ता बोलाइन्छ । ट्रेलरमा सलमानमाथि फिल्मांकन गरिएका डाइलग्स दमदार छन्, जस्तै, ‘शिकार त सबै गर्छन तर टाइगरभन्दा राम्रो शिकार अरु कोहीं गर्न सक्दैनन्... ।’ ‘टाइगर जिन्दा हे’बाट सलमान र कटरीनाको जोडी ५ वर्षपछि पर्दामा कमब्याक गर्दैछ ।
डिसेम्बर २२ मा रिलिज हुने यो फिल्म २०१२ मा रिलिज भएको कबीर खान निर्दे्शित सुपरहिट फिल्म ’एक था टाइगर’को सिक्वेल हो । अलि अब्बास जफार निर्दे्शित ‘टाइगर जिन्दा है’लाई आदित्य चोपडाले निर्माण गरेका हुन् । टाइगर सिरीजको तेस्रो भाग पनि आउने बताइएको छ । सूत्रका अनुसार, आदित्य चोपडा र सलमान खानले टाइगर फ्रेन्चाइजलाई अगाडि बढाउने फैसला गरेका छन् ।